စာမေးပွဲဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များ (အပိုင်း ၁) - Myanmar Network
Posted by Myanmar Network on December 27, 2013 at 11:07 in သုတ/ရသ ဆောင်းပါးများ
စာမေးပွဲမတိုင်မီ (Before the exam)
စာမေးပွဲတစ်ခုဖြေဆိုရန်အတွက် ကောင်းကောင်းပြင်ဆင်နိုင်ရန် လုပ်နိုင်တဲ့အရာတွေ များစွာရှိပါ တယ်။ များများပြင်ဆင်လေ စာမေးပွဲဖြေနေစဉ်အတွင်း စိတ်ရောကိုယ်ပါ သက်သောင့်သက်သာရှိမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ အခုပြောပြမဲ့ အကြံပြုချက်လေးတွေကို လိုက်နာကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးတော့ သင့်မှာ နောက်ထပ် အကြံကောင်းလေးတွေရှိရင်လည်း မျှဝေပေးစေလိုပါတယ်။
သင့်ရဲ့ မှတ်စုတွေကို သေသေသပ်သပ်နဲ့ ပြည့်စုံအောင်ထားပါ။ အတန်းတစ်တန်းလွတ်သွားပါက လွတ်သွားတဲ့စာတွေကို သူငယ်ချင်းထံမှ မှတ်စုများကို ငှားပါ။ (သို့မဟုတ်) ဆရာကို မေးပါ။
မှတ်စုတွေကို ကဏ္ဍအလိုက်ခွဲပြီး စီစဉ်ထားပါ။ ဥပမာ ဝေါဟာရ၊ သဒ္ဒါ၊ အသံထွက်၊ အပြော၊ အဖတ်၊ အကြား၊ အရေး စသဖြင့် ခွဲခြားထားပါ။ ဒီလိုလုပ်ထားတဲ့အတွက် စာမေးပွဲအတွက် ပြန်လှန်လေ့ကျင့်လိုတဲ့ အကြောင်း အရာကို အလွယ်တကူ ရှာဖွေနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။
မှတ်စုတွေကို စာမေးပွဲမဖြေမီတစ်ရက်အလိုကျမှသာ ဖတ်တာမျိုး မလုပ်သင့်ပါ။ နေ့စဉ် မှန်မှန် ကြည့်လာပါ။
သင် မှတ်ယူရမဲ့ အရေးကြီးတဲ့ အချက်အလက်တွေကို အလွယ်တကူ မြင်နိုင်ရန်အတွက် အရောင်မတူသော ဘောပင်တွေ ရောင်စုံမင်တံ (highlighter)တွေကို အသုံးပြုပါ။
မှတ်စုတွေကို အကျဉ်းချုပ်ပါ။ ဖြစ်နိုင်ရင် အဲဒီအတိုချုပ်တွေကို မိမိနဲ့တစ်ပါတည်း ယူသွားနိုင်တဲ့ ကတ်ပြားသေးသေးလေးတွေမှာ ရေးပြီး ဘတ်(စ်)ကား စီးတဲ့အခါ (သို့မဟုတ်) အားတဲ့အခါတိုင်းမှာ ထုတ်ဖတ်ပါ။
ပုံကြမ်း - ကားချပ်များရေးဆွဲပါ။
မှတ်စုထဲက အကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို နားမလည်ပါက အတန်းဖော် (သို့)ဆရာကို ရှင်းခိုင်းပါ။
ကျောင်းသားအများစုဟာ တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အချိန်နီးနီးကပ်ကပ်ဖြေဆိုရတဲ့ စာမေးပွဲတွေရှိတတ်ကြပါ တယ်။ ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ဖို့ အချိန်ကို စီစဉ်ပြီး ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ရန် အချိန်ဇယားရေးဆွဲခြင်းသည်လည်း အထောက် အကူဖြစ်စေပါတယ်။
ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ရန် အချိန်ဇယားဆိုတာ ဘာလဲ၊ တစ်ဘာသာချင်း ပြန်လေ့လာဖို့ အချိန်ဘယ်လောက်ရှိလဲ တွက်ချက်ပြီး သင် လေ့ကျင့်ရမဲ့ ဘာသာရပ် တွေနဲ့ ရရှိတဲ့အချိန်တို့ကို ဇယားဆွဲပါ။ အရာရာကို အချိန်လုံလုံလောက်လောက်နဲ့ ဆောင်ရွက်နိုင်ို့ဆိုရင် ထိုဇယားအတိုင်း လိုက်နာဆောင်ရွက်နိုင်အောင် ကြိုးစားပါ။
နောက်ဆုံးအချိန်ကျမှ ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခြင်းကို ရှောင်ကျဉ်ပါ။ စာမေးပွဲတစ်ခုအတွက် ပြန်လှန် လေ့ကျင့်ခြင်းကို တစ်ကြိမ်မက ပြုလုပ်ခြင်းက ကောင်းစွာ ကျက်မှတ်နိုင်အောင် အထောက်အပံ့ပေးပါလိမ့်မည်။ အကြောင်းအရာတွေကို တစ်ကြိမ်မက လေ့လာခြင်းသည် သင့်ရဲ့ ကြာရှည်စွာ မှတ်မိနိုင်စွမ်းကို အားပေးတဲ့ အတွက် သင့်မှတ်စုများကို မှန်မှန်လေ့လာပါ။
စာကျက်မှတ်နေစဉ်အတွင်းမှာ အချိန်မှန်မှန် အနားယူဖို့လည်း မမေ့ပါနှင့်။ တစ်နာရီစာကျက်မှတ် ပြီးတိုင်း ၁၅ မိနစ်အနားယူပါ။ ဒီလိုလုပ်ပေးခြင်းက သင်စာကျက်မှတ်တဲ့အခါ အာရုံစူးစိုက်နိုင်ခြင်းကို အထောက်အကူပြုပါတယ်။
ဖုန်းပြောခြင်းနှင့်အခြားသော နှောက်ယှက်မှုများ (Phones and other distractions)
သင်နဲ့သင့်သူငယ်ချင်းဟာ (၅)မိနစ်တစ်ကြိမ်စာ (message)တွေ ပို့နေကြမယ်ဆိုရင် စာလေ့လာရာ တွင် အာရုံစူးစိုက်ဖို့ ခက်ခဲပါလိမ့်မည်။ ဒါကြောင့်မို့လို့ သင့်ဖုန်းနှင့်သင် နှစ်သက်သော website တွေကို ပိတ်ထားပါ။ သင် အနားယူတဲ့အချိန်မှာ သူငယ်ချင်းဆီကို စာပို့နိုင်ပါတယ်။
လူတချို့ဟာ စာကျက်မှတ်နေတဲ့အခါ သီချင်းနားထောင်ရတာကို နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီလို နားထောင်ခြင်းက အာရုံစူးစိုက်နိုင်မှုကို အထောက်အကူဖြစ်စေပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ သီချင်းသံဟာ အာရုံစူးစိုက်မှုကို နှောက်ယှက်တာဆိုရင်တော့ ၄င်းကို ပိတ်ထားပါ။ ဒါမှမဟုတ် စာသားမပါတဲ့ တေးဂီတသံသက်သက်ကိုပဲ နားထောင်ပါ။ အနားယူတဲ့အချိန်တွေမှာတော့ သင်နှစ်သက်တဲ့ တေးဂီတကိုနားထောင်ပါ။
သီချင်းနားထောင်ရင်းနဲ့ကျက်မှတ်တာနဲ့ သီချင်းနားမထောင်ဘဲ ကျက်မှတ်တာ သင့်အတွက် ဘယ်နည်းက ပိုအဆင်ပြေလဲလို့ သိရအောင် (၂)နည်းစလုံးကို စမ်းကြည့်ပါ။ တချို့သော ဂီတသံဟာ သင့်ရဲ့ ကျက်မှတ်နိုင်စွမ်းကို အထောက်အပံ့ဖြစ်စေတာကို သင် သိမြင်လာပါလိမ့်မယ်။
ဦးဏှောက်အတွက် အစာအဟာရ (Brain food)
စာမေးပွဲအတွက် စာကျက်နေတဲ့ အတောအတွင်း သင့်တော်တဲ့ အစားအသောက်ကို စားခြင်းကလည်း အရေးကြီးပါတယ်။ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ စားသောက်ခြင်းသည် သင့်ကို များပြားသော စွမ်းအင်ကို ပေးနိုင်ပါတယ်။ သကြားလုံး၊ ချောကလက် အစရှိတဲ့ ချိုတဲ့ အစားအစာတွေက တာရှည်မခံတဲ့ စွမ်းအင်ကိုပဲ ပေးတယ်။ ဒါကြောင့် တာရှည်ခံတဲ့ စွမ်းအင်ကိုပေးတဲ့ အစားအစာတွေကို စားသောက်ခြင်းက ပိုမို ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အောက်မှာ အကြံပြုလိုက်တဲ့ ဦးဏှောက်ကို အကျိုးပြုမဲ့ အစားအစာများကို လေ့လာပြီး စာမေးပွဲအတွင်း သင်စားတဲ့ အစားအသောက်တွေ ထဲမှာ ၄င်းတို့ပါနိုင်ဖို့ ကြိုးစားပါ။
ဦးဏှောက်ကို အဟာရဖြစ်စေသော အစားအသောက်များမှာ ပေါင်မုန့်ညို(brown bread)၊ အီတလီခေါက်ဆွဲခြောက် (pasta)၊ ထမင်း(rice)၊ ပဲအမျိုးမျိုး (beans)၊ ကုလားပဲ(chickpeas)၊ ပဲနီကလေး(lentils)၊ ငါးသေတ္တာငါး(sardines)၊ ဆာမွန်ငါး(salmon)၊ ငါးမည်းလုံး(tuna)အစရှိသော အဆီပါသည့် ငါးအမျိုးမျိုး၊ ပုစွန်-ဂဏန်း ခုံးကောင် စတဲ့ အခွံမာရှိသော ရေသတ္တ၀ါများ(shell fish)၊ အမဲသား၊ ဆိတ်သားအစရှိသော အသားများ(red meat)၊ ကြက်သား(chicken)၊ ဒိန်ခဲ(cheese)၊ ဥအမျိုးမျိုး(eggs) လတ်ဆတ်သော အသီးအရွက် (fresh fruit and vegetables)၊ အသုပ်များ(salads)တို့ ဖြစ်ပါတယ်။
စာကျက်မှတ်နေစဉ်အတွင်း တစ်နေ့ကို ပုံမှန် ထမင်း (၃)နပ်စားခြင်းအပြင် ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော မုန့်ပဲသရေစာ(healthy snacks)တို့ကို မှန်မှန်စားခြင်းသည် သင့်ရဲ့ စွမ်းအင်တွေကို မြင့်မား စေပါတယ်။
သင့်ဦးဏှောက်သည် ရေဓာတ်ရဖို့ လိုပါတယ်။ဒါကြောင့် ရေများများသောက်ရပါမယ်။ ရေကို လုံလုံလောက်လောက် မသောက်ပါက မောပန်းခြင်း၊ ခေါင်းကိုက်ခြင်းတို့ကို ခံစားနိုင်ပါတယ်။
ဒါပေမဲ့လည်း ကဖိန်း(caffeine)ဓာတ်များပါဝင်သော ကိုလာ(cola)၊ လက်ဖက်ရည်(tea) (သို့) ကော်ဖ်ီ(coffee)တို့ကို အများကြီး သောက်ခြင်းကိုတော့ ရှောင်ကျဉ်ပါ။ ၄င်းတို့ကို များစွာသောက်ပါက ညကျ ကောင်းကောင်း အိပ်ပျော်ဖ်ို့ရာ ခက်ပါတယ်။
အဲဒါအစား သစ်သီးဖျော်ရည်နဲ့ ဆေးဖက်ဝင်အပင်တို့ဖြင့် ပြုလုပ်ထားသော လက်ဖက်ရည် (fruit juices and herbal teas) တို့ကို များများသောက်ပေးသင့်ပါတယ်။
စာမေးပွဲအတွက် စာလေ့လာကျက်မှတ်နေစဉ်အတွင်း ကိုယ်ကာယလေ့ကျင့်ခန်းများများလုပ်ပါ။ လေ့ကျင့်ခန်းသည် သင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲရှိ အောက်စီဂျင်လည်ပတ်မှုကို အားပေးပါတယ်။ သင့်ဦးဏှောက်ကလည်း အလုပ်ကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်ဖို့ အောက်စီဂျင်များများလိုပါတယ်။ အပြင်ထွက်လမ်းလျှောက်ပြီး လေကောင်း လေသန့်များများရှူပါ။ ရေသွားကူးပါ။ သူငယ်ချင်း များနဲ့ ဘောလုံးကန်ပါ။
မျက်စေ့များကို ဂရုစိုက်ပါ (Look after your eyes)
စာကျက်ခြင်းလုပ်ငန်းကို တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်ပြီး အလင်းရောင်များများရတဲ့ အခန်းထဲမှာ ဆောင်ရွက် ပါ။ သင့်အနေဖြင့် ညနေပိုင်းမှာ စာကျက်ရတာကို ပိုအားသန်ပါက သင့်မျက်စေ့များ မညောင်းရလေအောင် မီးအိမ်ကောင်းကောင်းတစ်လုံး ဆောင်ထားဖို့ မမေ့ပါနှင့်။
မျက်စေ့လေ့ကျင့်ခန်းများပြုလုပ်ပါ။ မျက်စေ့ဖြင့် အနီးရှိ အရာဝတ္ထုတစ်ခုခုကို ကြည့်လိုက်ပါ။ ပြီးလျှင် မျက်တောင်ကို ၃-၄ကြိမ်လောက် ခတ်လိုက်ပါ။ ခတ်ပြီးရင် အဝေးမှာရှိတဲ့ ပစ္စည်းတစ်ခုခုကို တစ်လှည့် ကြည့်ပါ။ မျက်တောင်ပြန်ခတ်ပါ။ ဒီလေ့ကျင့်ခန်းကို ၄-၅ ကြိမ်လောက်ပြုလုပ်ပါ။
သူငယ်ချင်းဖြင့် စာကို ပြန်လှန်လေ့ကျင့်ခြင်း (Revise withafriend)
သင်ကျက်မှတ်ပြီးသားစာတွေကို သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နှင့် ပြောဆိုဆွေးနွေးခြင်းသည် ကျက်ပြီးသားအကြောင်း အရာတွေကို ပိုမှတ်မိစေပါတယ်။
အချင်းချင်း စစ်ဆေးပေးနိုင်သလို တစ်ယောက်နား မလည်တဲ့အကြောင်းအရာကို ကျန်တစ်ယောက်က ရှင်းပြနိုင်ပါတယ်။ သူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ စာကို ပြန်လှန်လေ့ကျင့် ရတာဟာ ပို၍ ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။
စာမေးပှဲမတိုငျမီ (Before the exam)
စာမေးပှဲတဈခုဖွဆေိုရနျအတှကျ ကောငျးကောငျးပွငျဆငျနိုငျရနျ လုပျနိုငျတဲ့အရာတှေ မြားစှာရှိပါ တယျ။ မြားမြားပွငျဆငျလေ စာမေးပှဲဖွေနေစေဉျအတှငျး စိတျရောကိုယျပါ သကျသောငျ့သကျသာရှိမှာ ဖွဈပါတယျ။ အခုပွောပွမဲ့ အကွံပွုခကျြလေးတှကေို လိုကျနာကွညျ့လိုကျပါ။ ပွီးတော့ သငျ့မှာ နောကျထပျ အကွံကောငျးလေးတှရှေိရငျလညျး မြှဝပေေးစလေိုပါတယျ။
သငျ့ရဲ့ မှတျစုတှကေို သသေသေပျသပျနဲ့ ပွညျ့စုံအောငျထားပါ။ အတနျးတဈတနျးလှတျသှားပါက လှတျသှားတဲ့စာတှကေို သူငယျခငျြးထံမှ မှတျစုမြားကို ငှားပါ။ (သို့မဟုတျ) ဆရာကို မေးပါ။
မှတျစုတှကေို ကဏ်ဍအလိုကျခှဲပွီး စီစဉျထားပါ။ ဥပမာ ဝေါဟာရ၊ သဒ်ဒါ၊ အသံထှကျ၊ အပွော၊ အဖတျ၊ အကွား၊ အရေး စသဖွငျ့ ခှဲခွားထားပါ။ ဒီလိုလုပျထားတဲ့အတှကျ စာမေးပှဲအတှကျ ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့လိုတဲ့ အကွောငျး အရာကို အလှယျတကူ ရှာဖှနေိုငျမှာဖွဈပါတယျ။
မှတျစုတှကေို စာမေးပှဲမဖွမေီတဈရကျအလိုကမြှသာ ဖတျတာမြိုး မလုပျသငျ့ပါ။ နစေ့ဉျ မှနျမှနျ ကွညျ့လာပါ။
သငျ မှတျယူရမဲ့ အရေးကွီးတဲ့ အခကျြအလကျတှကေို အလှယျတကူ မွငျနိုငျရနျအတှကျ အရောငျမတူသော ဘောပငျတှေ ရောငျစုံမငျတံ (highlighter)တှကေို အသုံးပွုပါ။
မှတျစုတှကေို အကဉျြးခြုပျပါ။ ဖွဈနိုငျရငျ အဲဒီအတိုခြုပျတှကေို မိမိနဲ့တဈပါတညျး ယူသှားနိုငျတဲ့ ကတျပွားသေးသေးလေးတှမှော ရေးပွီး ဘတျ(ဈ)ကား စီးတဲ့အခါ (သို့မဟုတျ) အားတဲ့အခါတိုငျးမှာ ထုတျဖတျပါ။
ပုံကွမျး - ကားခပျြမြားရေးဆှဲပါ။
မှတျစုထဲက အကွောငျးအရာတဈခုခုကို နားမလညျပါက အတနျးဖျော (သို့)ဆရာကို ရှငျးခိုငျးပါ။
ကြောငျးသားအမြားစုဟာ တဈခုနှငျ့တဈခု အခြိနျနီးနီးကပျကပျဖွဆေိုရတဲ့ စာမေးပှဲတှရှေိတတျကွပါ တယျ။ ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ဖို့ အခြိနျကို စီစဉျပွီး ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ရနျ အခြိနျဇယားရေးဆှဲခွငျးသညျလညျး အထောကျ အကူဖွဈစပေါတယျ။
ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ရနျ အခြိနျဇယားဆိုတာ ဘာလဲ၊ တဈဘာသာခငျြး ပွနျလလေ့ာဖို့ အခြိနျဘယျလောကျရှိလဲ တှကျခကျြပွီး သငျ လကေ့ငျြ့ရမဲ့ ဘာသာရပျ တှနေဲ့ ရရှိတဲ့အခြိနျတို့ကို ဇယားဆှဲပါ။ အရာရာကို အခြိနျလုံလုံလောကျလောကျနဲ့ ဆောငျရှကျနိုငို့ဆိုရငျ ထိုဇယားအတိုငျး လိုကျနာဆောငျရှကျနိုငျအောငျ ကွိုးစားပါ။
နောကျဆုံးအခြိနျကမြှ ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ခွငျးကို ရှောငျကဉျြပါ။ စာမေးပှဲတဈခုအတှကျ ပွနျလှနျ လကေ့ငျြ့ခွငျးကို တဈကွိမျမက ပွုလုပျခွငျးက ကောငျးစှာ ကကျြမှတျနိုငျအောငျ အထောကျအပံ့ပေးပါလိမျ့မညျ။ အကွောငျးအရာတှကေို တဈကွိမျမက လလေ့ာခွငျးသညျ သငျ့ရဲ့ ကွာရှညျစှာ မှတျမိနိုငျစှမျးကို အားပေးတဲ့ အတှကျ သငျ့မှတျစုမြားကို မှနျမှနျလလေ့ာပါ။
စာကကျြမှတျနစေဉျအတှငျးမှာ အခြိနျမှနျမှနျ အနားယူဖို့လညျး မမပေ့ါနှငျ့။ တဈနာရီစာကကျြမှတျ ပွီးတိုငျး ၁၅ မိနဈအနားယူပါ။ ဒီလိုလုပျပေးခွငျးက သငျစာကကျြမှတျတဲ့အခါ အာရုံစူးစိုကျနိုငျခွငျးကို အထောကျအကူပွုပါတယျ။
ဖုနျးပွောခွငျးနှငျ့အခွားသော နှောကျယှကျမှုမြား (Phones and other distractions)
သငျနဲ့သငျ့သူငယျခငျြးဟာ (၅)မိနဈတဈကွိမျစာ (message)တှေ ပို့နကွေမယျဆိုရငျ စာလလေ့ာရာ တှငျ အာရုံစူးစိုကျဖို့ ခကျခဲပါလိမျ့မညျ။ ဒါကွောငျ့မို့လို့ သငျ့ဖုနျးနှငျ့သငျ နှဈသကျသော website တှကေို ပိတျထားပါ။ သငျ အနားယူတဲ့အခြိနျမှာ သူငယျခငျြးဆီကို စာပို့နိုငျပါတယျ။
လူတခြို့ဟာ စာကကျြမှတျနတေဲ့အခါ သီခငျြးနားထောငျရတာကို နှဈသကျကွပါတယျ။ ဒီလို နားထောငျခွငျးက အာရုံစူးစိုကျနိုငျမှုကို အထောကျအကူဖွဈစပေါတယျ။ ဒါပမေဲ့ သီခငျြးသံဟာ အာရုံစူးစိုကျမှုကို နှောကျယှကျတာဆိုရငျတော့ ၎င်းငျးကို ပိတျထားပါ။ ဒါမှမဟုတျ စာသားမပါတဲ့ တေးဂီတသံသကျသကျကိုပဲ နားထောငျပါ။ အနားယူတဲ့အခြိနျတှမှောတော့ သငျနှဈသကျတဲ့ တေးဂီတကိုနားထောငျပါ။
သီခငျြးနားထောငျရငျးနဲ့ကကျြမှတျတာနဲ့ သီခငျြးနားမထောငျဘဲ ကကျြမှတျတာ သငျ့အတှကျ ဘယျနညျးက ပိုအဆငျပွလေဲလို့ သိရအောငျ (၂)နညျးစလုံးကို စမျးကွညျ့ပါ။ တခြို့သော ဂီတသံဟာ သငျ့ရဲ့ ကကျြမှတျနိုငျစှမျးကို အထောကျအပံ့ဖွဈစတောကို သငျ သိမွငျလာပါလိမျ့မယျ။
ဦးဏှောကျအတှကျ အစာအဟာရ (Brain food)
စာမေးပှဲအတှကျ စာကကျြနတေဲ့ အတောအတှငျး သငျ့တျောတဲ့ အစားအသောကျကို စားခွငျးကလညျး အရေးကွီးပါတယျ။ ကနျြးမာရေးနဲ့ ညီညှတျတဲ့ စားသောကျခွငျးသညျ သငျ့ကို မြားပွားသော စှမျးအငျကို ပေးနိုငျပါတယျ။ သကွားလုံး၊ ခြောကလကျ အစရှိတဲ့ ခြိုတဲ့ အစားအစာတှကေ တာရှညျမခံတဲ့ စှမျးအငျကိုပဲ ပေးတယျ။ ဒါကွောငျ့ တာရှညျခံတဲ့ စှမျးအငျကိုပေးတဲ့ အစားအစာတှကေို စားသောကျခွငျးက ပိုမို ကောငျးမှနျပါတယျ။ အောကျမှာ အကွံပွုလိုကျတဲ့ ဦးဏှောကျကို အကြိုးပွုမဲ့ အစားအစာမြားကို လလေ့ာပွီး စာမေးပှဲအတှငျး သငျစားတဲ့ အစားအသောကျတှေ ထဲမှာ ၎င်းငျးတို့ပါနိုငျဖို့ ကွိုးစားပါ။
ဦးဏှောကျကို အဟာရဖွဈစသေော အစားအသောကျမြားမှာ ပေါငျမုနျ့ညို(brown bread)၊ အီတလီခေါကျဆှဲခွောကျ (pasta)၊ ထမငျး(rice)၊ ပဲအမြိုးမြိုး (beans)၊ ကုလားပဲ(chickpeas)၊ ပဲနီကလေး(lentils)၊ ငါးသတ်ေတာငါး(sardines)၊ ဆာမှနျငါး(salmon)၊ ငါးမညျးလုံး(tuna)အစရှိသော အဆီပါသညျ့ ငါးအမြိုးမြိုး၊ ပုစှနျ-ဂဏနျး ခုံးကောငျ စတဲ့ အခှံမာရှိသော ရသေတ်တဝါမြား(shell fish)၊ အမဲသား၊ ဆိတျသားအစရှိသော အသားမြား(red meat)၊ ကွကျသား(chicken)၊ ဒိနျခဲ(cheese)၊ ဥအမြိုးမြိုး(eggs) လတျဆတျသော အသီးအရှကျ (fresh fruit and vegetables)၊ အသုပျမြား(salads)တို့ ဖွဈပါတယျ။
စာကကျြမှတျနစေဉျအတှငျး တဈနကေို့ ပုံမှနျ ထမငျး (၃)နပျစားခွငျးအပွငျ ကနျြးမာရေးနှငျ့ ညီညှတျသော မုနျ့ပဲသရစော(healthy snacks)တို့ကို မှနျမှနျစားခွငျးသညျ သငျ့ရဲ့ စှမျးအငျတှကေို မွငျ့မား စပေါတယျ။
သငျ့ဦးဏှောကျသညျ ရဓောတျရဖို့ လိုပါတယျ။ဒါကွောငျ့ ရမြေားမြားသောကျရပါမယျ။ ရကေို လုံလုံလောကျလောကျ မသောကျပါက မောပနျးခွငျး၊ ခေါငျးကိုကျခွငျးတို့ကို ခံစားနိုငျပါတယျ။
ဒါပမေဲ့လညျး ကဖိနျး(caffeine)ဓာတျမြားပါဝငျသော ကိုလာ(cola)၊ လကျဖကျရညျ(tea) (သို့) ကျောဖျီ(coffee)တို့ကို အမြားကွီး သောကျခွငျးကိုတော့ ရှောငျကဉျြပါ။ ၎င်းငျးတို့ကို မြားစှာသောကျပါက ညကြ ကောငျးကောငျး အိပျပြျောဖို့ရာ ခကျပါတယျ။
အဲဒါအစား သဈသီးဖြျောရညျနဲ့ ဆေးဖကျဝငျအပငျတို့ဖွငျ့ ပွုလုပျထားသော လကျဖကျရညျ (fruit juices and herbal teas) တို့ကို မြားမြားသောကျပေးသငျ့ပါတယျ။
စာမေးပှဲအတှကျ စာလလေ့ာကကျြမှတျနစေဉျအတှငျး ကိုယျကာယလကေ့ငျြ့ခနျးမြားမြားလုပျပါ။ လကေ့ငျြ့ခနျးသညျ သငျ့ခန်ဓာကိုယျထဲရှိ အောကျစီဂငျြလညျပတျမှုကို အားပေးပါတယျ။ သငျ့ဦးဏှောကျကလညျး အလုပျကောငျးကောငျးလုပျနိုငျဖို့ အောကျစီဂငျြမြားမြားလိုပါတယျ။ အပွငျထှကျလမျးလြှောကျပွီး လကေောငျး လသေနျ့မြားမြားရှူပါ။ ရသှေားကူးပါ။ သူငယျခငျြး မြားနဲ့ ဘောလုံးကနျပါ။
မကျြစမြေ့ားကို ဂရုစိုကျပါ (Look after your eyes)
စာကကျြခွငျးလုပျငနျးကို တိတျဆိတျငွိမျသကျပွီး အလငျးရောငျမြားမြားရတဲ့ အခနျးထဲမှာ ဆောငျရှကျ ပါ။ သငျ့အနဖွေငျ့ ညနပေိုငျးမှာ စာကကျြရတာကို ပိုအားသနျပါက သငျ့မကျြစမြေ့ား မညောငျးရလအေောငျ မီးအိမျကောငျးကောငျးတဈလုံး ဆောငျထားဖို့ မမပေ့ါနှငျ့။
မကျြစလေ့ကေ့ငျြ့ခနျးမြားပွုလုပျပါ။ မကျြစဖွေ့ငျ့ အနီးရှိ အရာဝတ်ထုတဈခုခုကို ကွညျ့လိုကျပါ။ ပွီးလြှငျ မကျြတောငျကို ၃-၄ကွိမျလောကျ ခတျလိုကျပါ။ ခတျပွီးရငျ အဝေးမှာရှိတဲ့ ပစ်စညျးတဈခုခုကို တဈလှညျ့ ကွညျ့ပါ။ မကျြတောငျပွနျခတျပါ။ ဒီလကေ့ငျြ့ခနျးကို ၄-၅ ကွိမျလောကျပွုလုပျပါ။
သူငယျခငျြးဖွငျ့ စာကို ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ခွငျး (Revise withafriend)
သငျကကျြမှတျပွီးသားစာတှကေို သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျနှငျ့ ပွောဆိုဆှေးနှေးခွငျးသညျ ကကျြပွီးသားအကွောငျး အရာတှကေို ပိုမှတျမိစပေါတယျ။
အခငျြးခငျြး စဈဆေးပေးနိုငျသလို တဈယောကျနား မလညျတဲ့အကွောငျးအရာကို ကနျြတဈယောကျက ရှငျးပွနိုငျပါတယျ။ သူငယျခငျြးတဈယောကျယောကျနဲ့ စာကို ပွနျလှနျလကေ့ငျြ့ ရတာဟာ ပို၍ ပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။
Permalink Reply by Aye Myat Myat Moe on December 27, 2013 at 11:53
Permalink Reply by Nay Chi Lin on December 27, 2013 at 13:43
It will be useful for every students . Thank for your advices.
Permalink Reply by Aung Win Naing on January 22, 2015 at 15:10
Really useful for students. I'd like to suggest that this kind of suggestions should be widely informed.
Permalink Reply by houng ning on October 8, 2015 at 13:43
Permalink Reply by Kundala on October 12, 2015 at 23:36
Very good suggession!
Permalink Reply by khainggyigyikhaing@gmail.com on October 13, 2015 at 10:40